January 18, 2021 - Padaethar
အပျိုစစ်စစ်များသာဖတ်ပါ…အေအိုတွေဖတ်မိရင် စိတ်ဓါတ်ကျမှာစိုးလို့ ပါ….
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး တမျိုး မထင်ပါနဲ့ နော်….အအိုတွေဖတ်မိရင် စိတ်ဓါတ်ကျမှာစိုးလို့ ပါ….အပျိုစစ်စစ်ဆိုတာက ခုခေတ်က ၁၆ နှစ်၁၇ နှစ်ဆိုရင်ကို ရည်းစားက ရှိနေကြတာ…ရည်းစားဖြစ်တာ ၁ ရက်မကြာသေးဘူး living together က နေနေကြပြီလေ… တကယ်တော့ လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့ အတူတူနေကြတာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်အတွက် လုံးဝတန်ဖိုးကျသွားပါပြီ…..ပျိုစင် ဘဝဆိုတာ ယောင်္ကျားတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းကို ခံထားရသူလို့ တောင် တင်စားထားကြပါတယ်…. အပျိုစင်ကနေ အအို ဖြစ်ဖို့ က ၅မိနစ်မကြာပါဘူး… ဒါပေမယ့် အအိုကနေ အပျို ပြန်ဖြစ်ဖို့ ကရှိသမျှ စည်းစိမ်း ပုံပေးမယ်ဆိုရင်တောင် ဒီ ဘဝအတွက်ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး….ချစ်သူရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီအပျိုစင်ဘဝကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ချစ်သူကို နားလည်အောင်သူသဘောပေါက်အောင် ပြောပြထားပါ ၊ ဒါမှ သူဘက်က လက်မခံဘူး ၊စိတ်ခုသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ရဲရဲကြီးသာ … Read more
(၁၈.၁.၂၀၂၁)မှ(၂၄.၁.၂၀၂၁)အထိ ၇ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာ ကံကြမ္မာ အထူးဟောစာတမ်း
(၁၈.၀၁.၂၀၂၁)မှ(၂၄.၀၁.၂၀၂၁)အထိ တစ်ပါတ်စာအထူးဟောစာတမ်း မိတ်ဆွေများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဒီရက်အတောအတွင်းမှာ ပြသနာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရှင်းနေရတတ်ပါတယ်။ မီးလျှပ်စစ် ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်များလည်း သတိထား သင့်ပါတယ်။ ခရီးကံ အထူးကောင်းပါတယ်။ ရပ်ဝေးပြည်ပ အကျိုးထူးမယ့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက အဆက်အသွယ် အကူအညီကောင်းတွေလည်း ရလာတတ်ပါတယ်။ထွက်နေတဲ့ငွေတွေ ၊ ပစ္စည်းတွေပြန်ဝင်တာ၊ ကွဲကွာနေသူများနှင့်ပြန်ဆုံတာအိမ်၊ရာထူး၊အလုပ်၊ နေရာကိစ္စ အောင်မြင်တာတွေလည်း ကြုံနိုင်ပါတယ်။ အသီးအနှံ၊ သစ်၊ သံ၊သွပ်၊ရေထွက်ကုန်၊အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း၊ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အကျိုးပေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မြေ၊အမွေ၊ဖုန်း၊ပညာရေးကိစ္စများ၊ မတင်မကျဖြစ်ပြီးမှ အောင်မြင်မယ်။ အထည်၊ထီး၊ဖိနပ်၊ စာချူပ်စာတမ်းကိစ္စများ မကောင်းလှပါဘူး။ ငွေအဝင်အထွက် ကြမ်းမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ စိတ်ချမ်းသာရပြီး ၊ချစ်သူရည်းစားများ လမ်းခွဲရမတတ် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထီဝါသနာပါရင် ၁၆ ရှေမှာ ပူးနေတဲ့ ထိလက်မှတ်ကိုရှာပြီး ထိုးပါလေ။ ကျမ်းမာရေးအညံ့ဘက်ကို များနေပါတယ်။ယတြာ။ ။ သစ်သီး ( ၆ … Read more
သင့်ကို သူလုံးဝမချစ်တော့ဘူးဆိုတာ သက်သေပြနေတဲ့ အပြုအမူများ
သင့်ကို သူလုံးဝမချစ်တော့ဘူးဆိုတာ သက်သေပြနေတဲ့ အပြုအမူ (၅) ခု လူ့စိတ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းရခက်သလိုပဲ အပြောင်းလဲလည်း လွယ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အချစ်စိတ်တွေမှာပေါ့။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေဟာ ဆန်းကျယ်သလိုပဲ အဲဒီချစ်ခြင်းတရားတွေ ပျောက်ကင်းသွားဖို့ဆိုတာလည်း သိပ်လွယ်ကူလှပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင့်ချစ်သူဟာ သင့်အပေါ်မှာ အချစ်စိတ်တွေ ကုန်ခမ်းနေပြီလားဆိုတာ ဒီအချက် ၅ ချက်နဲ့ စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ (၁) အားမထုတ်တော့ဘူး သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ပြဿနာဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်လို ပြန်အဆင်ပြေအောင် ငြှိနှိုင်းတော့မှာမဟုတ်ဘဲ ဒီတိုင်း ပစ်ထားပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင်နဲ့အတူတူရှိနေဖို့အတွက် ဘယ်လိုအားထုတ်မှုမျိုးကိုမှ မလုပ်တော့ပါဘူး။ အရမ်းသိသလာပါလိမ့်မယ်။ (၂) ရင်ဘတ်ချင်းမရင်းနှီးကြတော့ဘူး သင်နဲ့သူနဲ့ အရင်တုန်းက ပုံမှန်လေးတွေ့မယ်၊ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ မဖော်ပြဘဲနဲ့ မျက်လုံးအကြည့်နဲ့တောင်မှပဲ ဘာပြောသလဲ နားလည်နေမယ်ပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့လည်း အခုနောက်ပိုင်း … Read more
သင့်ကို အပျော်ကြံယုံ ချည်းကပ်လာတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ တွေ့ရမယ့် စရိုက်လက္ခဏာ(၄)ချက်
သင့်ကို အပျော်ကြံရုံ ချည်းကပ်လာတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ တွေ့ရမယ့် စရိုက်လက္ခဏာ(၄)ချက် တစ်ချို့ယောကျာ်းလေးတွေက မိန်းကလေးတွေရဲ့ အချစ်ကို ကစားရတာ ကြိုက်တတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သူတို့ခဏတာ စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ခဏတာ အသုံးချတာမျိုးကိုလည်း ပြုလုပ်လွယ်တတ်ကြသူတွေပါ။ ဒီတော့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ သတိထားမိစေဖုိ့၊ လွယ်လွယ်အယုံမလွယ်မိဖို့ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်နော်။ မိန်းကလေးတွေကို အပျော်ကြံဖို့သက်သက် ချည်းကပ်တတ်တဲ့ အမျိုးသားတွေမှာတော့ ဒီလို အချက်တွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ( 1 ) လျို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တယ် မိန်းကလေးတွေကို အပျော်ကြံတတ်တဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ ပုံစံက လျို့ဝှက်ချက်တွေများသလိုပဲ နားလည်ရလည်း ခက်စေတတ်ပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့အတွက် ဒီနည်းလမ်းဟောင်းကို အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်တဲ့။ ဒါက သူ့အကြောင်း ဘာမှမသိရပေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက် စိတ်ဝင်စားလာအောင် သူတို့ရဲ့ အပြောတွေ၊ … Read more
၁၅ရက်တာအတွင်း လိုတရယတြာ(16-12-2020 မှ 30-12-2020)အတွင်း ၇ရက်သားသမီးများ စီးပွားရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုရေး အခက်အအခဲများ အဆင်ပြေစေခြင်းငှာ အောက်ပါ ယတြာကို ဒါနပြုပါရစေ…..။ မိမိ ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှေ့တွင် ပန်းကန်ပြား တချပ်ပေါ်တွင်သရက်ရွက်၂ရွက်တင်ပါ။သရက်ရွက်ပေါ်တွင် ဆားအနည်းငယ်(ပုံပါ)ပုံပေးပါ။ ထို့နောက် ကော်ဖီပူပူ တခွက် ထိုသရက်ရွက်ပေါ် ကော်ဖီခွက်ကိုတင်ပြီး ဘုရားကပ်လှူပါ။ ကပ်လှူစဉ် ၁၅ရက်တာအတွင်း မိသားစုတွင်း ငွေဝင်လာဘ်ရွှင် စီးပွားတိုး၍ အစစအရာရာ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းရပါလို၏ဟု ဆုတောင်းပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်၇နာရီမှ ၇နာရီခွဲအတွင်းပြုလုပ်ပါ…..။ နောက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် နီးစပ်ရာ အပင်ကြီးအခြေတွင် စွန့်ပစ်ရပါ့မယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသာ ပြုလုပ်ပါရန်) credit ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာပညာရှင်ဆရာကျော် M.Sc (bot)09978031461/09764251903 unicode ၁၅ရကျတာအတှငျး လိုတရယတွာ(16-12-2020 မှ 30-12-2020)အတှငျး ၇ရကျသားသမီးမြား … Read more